KU DAYO: Xero Qaxoonti Ayuu Ku Jiray, Caawana Finalka Champions League Ayuu Ciyaaraya – Qisooyinka Layaabka Leh Ee Alphonso Davies – Laacibnet.net
KU DAYO: Xero Qaxoonti Ayuu Ku Jiray, Caawana Finalka Champions League Ayuu Ciyaaraya – Qisooyinka Layaabka Leh Ee Alphonso Davies
August 23, 2020 Abdiwahab Ahmed
Caawa waxa uu ciyaarayaa finalka Champions League, laakiin 19ka sannadood ee ay da’diisu jirto waxay ahaayeen kuwo uu duruufo nololeed oo kala duwan kusoo jiray.
Alphonso Daves, waxa uu ka mid ahaa xiddigaha ugu fiican Bayern Munich xili ciyaareedkan, waxaana caawa laga sugayaa inuu qayb weyn ka qaato kulanka finalka Champions League ee PSG ay isku haleelayaan. Laakiin sida ciyaartoyda kale ee garoonka ay kusoo wada bilaaban doonaan, muu ahayn laacib kusoo koray nolol wanaagsan iyo koolkoolin.
Waxa uu ku dhashay waddanka Liberia oo uu asal ahaan kasoo jeedo, laakiin isaga oo aad u yar ayay waalidiintiisu kasoo qaxeen dalkaas oo ay ka jireen colaado daba dheeraaday oo dad badan ku dhinteen. Waxay tageen xero qaxoonti oo ku taalla waddanka Ghana oo ay sannado ku jireen.
Aabbaha dhalay Davies, waxa lagu magacaabaa Debeah, hooyadiina waa Victoria, waxaanay degganaan jireen caasimadda Liberia ee Monrovia ka hor intii aanay dagaallada sokeeye qarxin.
“Si aanu naftayada u badbaadsano, waxaanu ku qasbanayn inaanu qoriga qaadano, waanan haystay, mayna ahayn wax aanu doonayno inaanu samayno. Meeshu waxay ahayd cabsi, waa inaad u baxdo inaad soo hesho midho la cuno.” Sidaas waxa yidhi Debeah oo la hadlay warbaahinta, kana sheekaynaya noloshii adkayd ee ka hor intii aanu waddankiisa Liberia ka cararin.
Debeah iyo Victoria waxay ka ordeen dalkooda, waxaanay gaadheen xerada qaxoontiga ee Buduburam ee ku taalla galbeedka caasimadda Ghana ee Accra.
“Nolosha halkaasi waxay ahayd sidii aad ku jirto KOONTEENAR, kaddibna furihii lagaa tuuray. May jirin meel aanu dibedda uga baxnaa.” Ayuu Debeah ku daray.
Nasiib-wanaag, Davies iyo qoyskiisu waxay magan-gelyo qaxoontinimo ka heleen waddanka Canada oo ay usoo guureen, waxaana Debeah oo ka sheekaynaya sidii uu fursaddaas ku helay uu yidhi: “Waxba kamaan garanayn (Canada) iyo xataa qof ka yimid halkaas minda, laakiin waxaan idhi waa caadi.”
Waxay dageen magaalada Edmonton oo uu Davis ka bilaabay iskuulka sannadkii 2006, waxaanu isla waqtigaas bilaabay inuu kubadda cagta ciyaaro. Waxa uu qayb ka noqday goob ciyaartoyda dayacan ee danyarta ah lagu ciyaarsiiyo oo ku taalla Edmonton.
“Alphonso waxa uu tusaale u yahay waxa dhici karaya marka uu qof waliba uu tubta toosan qaado, laakiin wiilkaasi wuxuu lahaa wax gaar ah.” Sidaas waxa yidhi Guddoomiyaha akaademiyadda Free Footie, Tim Adams oo waqtigaas gacanta ku hayey laacibkan.
Adams iyo Marco Bossio oo macallin ka ahaa dugsiga St. Nicholas Catholic School, sidoo kalena maamulayay akaademiyadda kubadda cagtu ay u tageen kooxda Vancouver Whitecaps oo ay ku qalqaaliyeen inay ogolaadaan in da’yarkeeda uu ka mid noqdo Alphonso Davies, halkaas ayaanu tallaabadii ugu horreysay ee xirfaddiisu ka hirgashay.
Markii ay da’diisu ahayd 14 jir, waxa Davies uu u wareegay Vancouver oo 1,000 kiiloo mitir u jirta magaalada ay degganaayeen, taasina waxay walaac ku abuurtay hooyadii oo u werwertay wiilkeeda qaxoontiga ku yimid waddanka ee isaga oo da’yar ah ka guurtay guriga.
“Aad ayaan u cabsanayay. Waxaan ogaa waxa ay qaar ka mid ah da’yartu sameeyaan, mana aanan doonayn in taasi dhacdo. Waxa aan isku dayay inaan dib u dhigo safarkiisa illaa inta uu noqonayo 16 jir ama 17 jir, laakiin wuxuu ii ballanqaaday in aanu isbeddeli doonin iyo inuu sharaf noo yeeli doono.” Ayay tidhi Victoria oo ah hooyada dhashay Alphonso Davies.
Markii ay da’diisu 15 jir noqotay, Davies waxa uu kulankiisii ugu horreeyey ee horyaalka waddanka Maraykanka ee MLS u saftay Whitecaps, waxaana markaas da’da 15ka u dheeraa siddeed bilood oo kaliya, waxaanu noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee dhashay qarniga 21aad ee horyaalka heerka koowaad ee Maraykanka ka ciyaara.
Sannadkii 2017kii ayaa la siiyey dhalashada waddanka Canada intii horena waxa uu ahaa qaxoonti waddankanka jooga, waxaanu isla sannadkaas u ciyaaray xulka qaranka Canada ee ka qayb-galay koobka Gold Cup, isaga oo u dhaliyey gool uu ku galay taariikhda isaga oo noqday ciyaartoygii ugu da’da yaraa ee taariikhda dalkaas gool u dhaliya.
Xagaagii 2018 ayay Bayern Munich heshiis la gashay, waxaanu Jarmalka usoo guuray markii ay da’diisu noqotay 18 jir.
Waayahan murugada iyo farxadda leh, waxay hadda marayaan inuu ka mid yahay ciyaartoyda dunida ugu wanaagsan iyo in si gaar ah isha loogu haynayo kulanka caawa ee finalka Champions League oo ay Bayern Munich ka sugayso inuu koobka ku hoggaamiyo.
Akhriste, qisada nololeed ee Alphonso Davies waxa ku duugay cibaarooyin badan iyo waxyaabo lagaga dayan karo, waxaana inta nasiibku siiyey inay da’yaraan ku helaan fursadihiisa oo kale, gaar ahaan inay garoomada ciyaaraha ee macallimiinta caalamiga ahi joogaan heli karaysa ay tahay inay sidiisa oo kale iskugu dayaan inay ciyaaraha heer sare ka gaadhaan, kana fogaadaan balwadaha, caajiska iyo waxyaabaha himilooyinka nololeed ee wanaagsan ka hor istaaga binu-aadamka.
Wa arin ku dayasho mudan
Wa kaga mahadcelinayaaa dadaalka dheer ad so gelisay si aad nogu so gudbiso
Mahadsanid ustaad osman
Wa Arin kudayasha run ahantii ad iyo ad Ayan oladacey